ဒီဘရိုင်းနား De Bruyne ရဲ့ ဒဏ်ရာအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ်
လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ ဒီဘရိုင်းနား De Bruyne
16 Aug 2018 . 10:21 AM
မန်စီးတီးအသင်းကွင်းလယ်လူ ဒီဘရိုင်းနား De Bruyne ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကလေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာ ညာဘက်ဒူးဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီဘရိုင်းနား De Bruyne အနေနဲ့ (၃)လခန့် အနားယူရဖို့ရှိတယ်လို့ သတင်းတွေကဖော်ပြနေကြပါတယ်။ ဒီဘရိုင်းနား De Bruyne ဟာ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကလည်း ညာဘက်ဒူးဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ဖူးပြီး အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်(၁၂)ပွဲကိုလွှဲချော်ခဲ့ရပါတယ်။ ဘောလုံးရာသီသစ် ပြန်စခြင်းမှာ ဒီဘရိုင်းနား De Bruyne ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကတော့ မန်စီးတီးအသင်းအတွက် ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ။
ဒီဘရိုင်းနား De Bruyne ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီက မန်စီးတီးအသင်းအတွက် ခြေစွမ်းပြကစားခဲ့သူဖြစ်ပြီး မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ Player of the Year ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ အသက်(၂၇)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သူ ဒီဘရိုင်းနား De Bruyne ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီက မန်စီးတီးအသင်းအတွက် သွင်းဂိုး(၂၁)ဂိုးဖန်တီးပေးခဲ့ပြီး သွင်းဂိုး(၁၂)ဂိုးသွင်းယူထားသူပါ။ ဒီဘရိုင်းနား De Bruyne ဟာ မန်စီးတီးအသင်းနဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဆုကို (၁)ကြိမ် ၊ လိဂ်ဖလားချန်ပီယံဆုကို (၂)ကြိမ်ရရှိထားပါတယ်။ မန်စီးတီးအသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်မှာ ဒီဘရိုင်းနား De Bruyne ဟာ အဓိကနေရာမှာရှိနေတာကြောင့် ဒီဘရိုင်းနား De Bruyne မပါဝင်တဲ့ မန်စီးတီးအသင်းကွင်းလယ်အခြေအနေက ဘယ်လိုအနေအထားမှာရှိမလဲဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
Ref: BBC Sport
Photo: SportsJOE.ie , Stadium Astro
လကေ့ငျြ့ရေးကှငျးမှာ ဒဏျရာရရှိခဲ့တဲ့ ဒီဘရိုငျးနား De Bruyne
မနျစီးတီးအသငျးကှငျးလယျလူ ဒီဘရိုငျးနား De Bruyne ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ်ဓဟူးနကေ့လကေ့ငျြ့ရေးကှငျးမှာ ညာဘကျဒူးဒဏျရာ ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒီဘရိုငျးနား De Bruyne အနနေဲ့ (၃)လခနျ့ အနားယူရဖို့ရှိတယျလို့ သတငျးတှကေဖျောပွနကွေပါတယျ။ ဒီဘရိုငျးနား De Bruyne ဟာ ၂၀၁၆ ခုနှဈကလညျး ညာဘကျဒူးဒဏျရာ ရရှိခဲ့ဖူးပွီး အသငျးရဲ့ပှဲစဉျ(၁၂)ပှဲကိုလှဲခြျောခဲ့ရပါတယျ။ ဘောလုံးရာသီသဈ ပွနျစခွငျးမှာ ဒီဘရိုငျးနား De Bruyne ဒဏျရာရရှိခဲ့တာကတော့ မနျစီးတီးအသငျးအတှကျ ထိုးနှကျခကျြတဈခုလို့ဆိုရမှာပါ။
ဒီဘရိုငျးနား De Bruyne ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံးရာသီက မနျစီးတီးအသငျးအတှကျ ခွစှေမျးပွကစားခဲ့သူဖွဈပွီး မနျစီးတီးအသငျးရဲ့ Player of the Year ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယျ။ အသကျ(၂၇)နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈသူ ဒီဘရိုငျးနား De Bruyne ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ဘောလုံးရာသီက မနျစီးတီးအသငျးအတှကျ သှငျးဂိုး(၂၁)ဂိုးဖနျတီးပေးခဲ့ပွီး သှငျးဂိုး(၁၂)ဂိုးသှငျးယူထားသူပါ။ ဒီဘရိုငျးနား De Bruyne ဟာ မနျစီးတီးအသငျးနဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံဆုကို (၁)ကွိမျ ၊ လိဂျဖလားခနျြပီယံဆုကို (၂)ကွိမျရရှိထားပါတယျ။ မနျစီးတီးအသငျးရဲ့ ကှငျးလယျမှာ ဒီဘရိုငျးနား De Bruyne ဟာ အဓိကနရောမှာရှိနတောကွောငျ့ ဒီဘရိုငျးနား De Bruyne မပါဝငျတဲ့ မနျစီးတီးအသငျးကှငျးလယျအခွအေနကေ ဘယျလိုအနအေထားမှာရှိမလဲဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပါ။
by Ko Kyue . 11 hours ago
by Ko Kyue . 23 hours ago